'Unyango lweziBini' E.P Uxoxa ngeXesha lesiThandathu, kunye nokuGcina ubudlelwane beDMX | - Itv
Eyona Itv 'Unyango lweziBini' E.P Uxoxa ngeXesha lesiThandathu, kunye nokuGcina ubudlelwane beDMX
'Unyango lweziBini' E.P Uxoxa ngeXesha lesiThandathu, kunye nokuGcina ubudlelwane beDMX
Umlingisi kunye nemodeli uCarmen Carrera kunye nomyeni wakhe, u-Adrian Torres bayinxalenye yexesha lesithandathu le-VH1's Unyango lwezibini kunye noGqirha Jenn Mann. (ifoto: VH1)
Kutheni le nto abantu beya kumabonwakude kwaye bathethe ngezona ndawo zisondeleleneyo kubudlelwane babo, bavule imicimbi engathandekiyo yobuqu, ukuze bonke babone?
Kungenxa yokuba ukwenza njalo kuhlala kusebenza ukunceda abantu bafikelele kwinqanaba elitsha lokuqonda, utsho Unyango lwezibini kunye noGqirha Jenn UMvelisi oLawulayo uJohn Irwin. Uninzi lwaba bantu aluzange lwenze unyango ngaphambili kwaye aluqondi ukuba luhamba njani. Kwaye iyasebenza. Intle kakhulu ebhodini, wonke umntu okhe wabonisa unamava aphumeleleyo. Into endiyithethayo yile, bathatha isigqibo sokwenza ubudlelwane busebenze okanye bathathe isigqibo sokuba ayenzelwanga ukuba babe kunye. Nokuba sithatha siphi isigqibo, kukho intshukumo eya phambili kubudlelwane.
Kulabo abangaqhelananga nayo , Unyango lwezibini kunye noGqirha Jenn yinto yokwenene ebonisa ukuba i-VH1 izibini ezichazayo njengoko zifumana iingcebiso malunga nolwalamano kugqirha uGqirha Jenn Mann.
Eli xesha, elelesithandathu kuthotho, libonisa ubuntu be-TV uJanice Dickinson noGqirha Robert 'Rocky' Grener abaphakathi kokuthatha isigqibo sokuba ngaba uhambo oluya ezantsi kwikamva labo, imodeli uCarmen Carrera no-Adrian Torres, okwangoku Ukwahlukana emva kweminyaka emithandathu bezama ukugcina umtshato wabo, u-rocker uScott Stapp kunye nenkosikazi yakhe uJaclyn Stapp, abasokolayo ukugcina ubudlelwane phakathi kwemicimbi yokulutha, rapper Joe Budden kunye nentombi yakhe uKaylin Garcia abajongana nemicimbi yokuthembana, kunye no-Angela 'Big Ang 'Railoa ukusuka Abafazi behlokondiba kunye noNeil Murphy, abasecicini lokuqhawula umtshato.
UGqirha Jenn Mann (owayesakuba nguGqirha Jenn Berman) ngumtshato owaziwayo kunye nonyango losapho. UMann ukwangumphathi weenkqubo ezithandwayo zokucebisa umnxeba UGqr Jenn Show Kwi-Sirius XM kunye nombhali weencwadi ezintathu ezithengisa kakhulu: I-SuperBaby: Iindlela ezili-12 zokuNika uMntwana wakho iNtloko yokuQala kwiminyaka emi-3 yokuqala , Isikhokelo sika-A ukuya ku-Z sokuKhulisa abantwana abaNwabileyo abazithembileyo kwaye Rockin ’Iintsana .
Ukwenza abathathi-nxaxheba bazibophezele ekubonakaleni kuthotho ayingomsebenzi mncinci uvuma u-Irwin. Ewe, ayisiyonto ilula ukuyenza, kodwa xa sibabonisile ukuba oku kuncede abantu ngaphambili, bakhwela ngokukhawuleza.
U-Irwin uthi ekuphoseni, iqela lakhe likwasebenza ukwenza izibini ezijamelene nemicimbi eyahlukeneyo kwaye ezo meko azenziwanga nangayiphi na indlela. Siqinisekisa ukuba imeko yomntu wonke iyinyani kwaye aba bantu abakho apha ukuxhaphaza abantu abadumileyo nangayiphi na indlela.
Nokuba siyintoni na isizathu sokuba abathathi-nxaxheba bavume ukubonakala kumdlalo, u-Irwin uthi bakhawuleza babambeka kwinkqubo yonyango. Elona candelo liphambili kukuba siyidubule ngohlobo lweempepha ngaphandle kwempembelelo okanye ungenelelo lwabasebenzi nangayiphi na indlela. Ukwenza ngolu hlobo kubavumela ukuba balibale iikhamera ezikhoyo kwaye iintshukumo zabo kunye nokuphendula kwabo kuyinyani.
U-Irwin uyazi ukuba kunokubakho abantu abathathela ingqalelo uthotho apho izithandani zisasaza 'iimpahla zazo ezimdaka' ukuba zibe 'kumgangatho ophantsi' kumabonwakude kodwa kuloo nto ayithethayo, ndingavumelani ngentlonelo nolo luvo. Ukuba le yenzelwe ukuba ndiqonde ukuba kutheni abantu besitsho, kodwa oku kuyinyani. Aba bantu abafihli nto, kuba abanako kwesi silungiselelo. Kwaye, inokuba sisixhobo sokwenyani sokufunda kubabukeli kuba banokubona into ebanceda ngokubukela aba bantu bathembeke ngokumasikizi kwaye baziveze kumzamo wokufumana uncedo. Uyakhawuleza nokongeza, ndiyazi kwingxelo esiyifumanayo ukuba senza umahluko. Ndiyathetha, siyazi ukuba asinyangi umhlaza okanye nantoni na enjalo, kodwa sisenza umahluko kubomi babantu, okungaphezulu kunokuba ungatsho ngemiboniso emininzi.
Ukuqhubela ekhaya inqaku lokuba abo bavela kuthotho batshintshiwe ngamava, u-Irwin uchaza okwenzekileyo nge-rapper DMX xa yena kunye nowayesakuba ngumfazi wakhe bevela kolu ngcelele. Babetsala nzima ngokwenene neziyobisi zakhe kwaye wayevalelwe kwaye banabantwana ababesazi ukuba bafuna ukubakhulisa kunye. Ke, ekuqaleni ubonile lo mfo ulukhuni engena emnyango kwaye ucinga nje, 'yiDMX le, uyenzela ukubhengeza okanye mhlawumbi ufuna ukubhatalwa,' kodwa kwakuchukumisa ukubukela esophuka kwaye elila. Kwaye konke kungenxa yokuba wayefuna ukusebenza kunye nesidala sakhe ukufumana indlela elungileyo yokuba ngabona bazali babalaseleyo banokuba ngabo. Ndingathi lo mzekelo uchaza uthotho lwethu kunye nento esiyenzayo.
Ngokusebenza kolu thotho, u-Irwin uthi ufundile izinto ezimbalwa malunga ne-coupledom. Ndicinga ukuba baninzi kakhulu abantu ababini abanokwenza ubudlelwane ukuba bayayifuna, kodwa kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna na. Unzima, unzima umsebenzi. Kulapho ifilosofi ka-Irwin enomdla malunga nonyango ingena khona njengoko esitsho, ndicinga ukuba ukuya kunyango kufana nokuxubha amazinyo. Uhlamba amazinyo akho yonke imihla ukuze uwagcine esempilweni, ke kuya kufuneka uthathe inxaxheba kunyango ukugcina ulwalamano lwempilo luhleli.
Ukuza kuthi ga ngoku, u-Irwin okwangoku unothotho olutsha kwimisebenzi enesihloko Unyango loSapho , kuba, njengoko esitsho, Kuyafana nakwizibini ezitshatileyo; ukugcina unxibelelwano olomeleleyo, nolusempilweni kufuneka uthethe ngezinto kwaye uqhubeke ulungisa izinto. Injalo nje indlela yokuphila - ukuba ufuna ukuba yinxalenye yesibini okanye usapho, kukho umsebenzi ekufuneka wenziwe ukuze wonke umntu onwabe. Olo hambo aluzange lube lula ngenene, lunokuba mbi kwaye lube nzima ukubukela, kodwa luyimfuneko entle. Yiloo nto esiyenzayo Unyango lweziBini kwaye siza kwenza ntoni Unyango loSapho - sizidiliza iindonga ezifuna ukonakaliswa.
Unyango lweziBini umoya ngoLwesithathu ngo-10 / 9c kwi-VH1.
Nantsi into i-Millennial Version 'Yesini kunye neSixeko' Ngaba iya kujongeka
Ngaba i-albhamu yeminyaka engama-50 ubudala yePop yasePop yaseka ukusiKhathaza?
irachel maddow ixilongo ukubuya kwerhafu
umthetho kunye neodolo svu brooke shields
Iincakuba zikaharry vs iklabhu yokucheba iidola
i-england lilizwe le-fag
isikolo senkolo yefilosofi esebenzayo
Uvavanyo lwe-dr ax oluvuza amathumbu